Ebook: Gini bu ahia ndu? | Martech Zone
Gịnị bụ ahịa ndụ? Dị ka anyị si kwuo ndị na-akwado akpaaka ahịa, ndu ndu ndi mmadu bu:
… Banyere otu ndị otu dị iche iche si eso mmekọrịta na atụmanya na ndị ahịa gafee ọkwa niile nke mmekọrịta ha na akara ha.
Mkpakọrịta gị ọ na-enyere ma ọ bụ na-emebi akara gị?
Ahịa na ire ahịa agbanweela nke ukwuu n'ime afọ 50 gara aga, ma hapụ naanị afọ iri gara aga. Ugba ahu adighi ka ya. Ọ bụghị ụzọ kwụ ọtọ - akụrụngwa ahịa na-eme ka ndị ahịa gị nwee ike itinye aka na ya, mana na-eme mkpebi n'ezo nke aka ha. Ka nwere ike ịnakọta ozi gbasara profaịlụ ndị ahịa mgbe ị nọ n'ebe dị anya, nke bụ ihe ọtụtụ ndị ahịa nwere ike ịhọrọ ụbọchị ndị a.
50% nke ndị ruru eru adịghị njikere ịzụta, yana usoro ịre ahịa na-arị elu site na 33%.
Ebook a na-abanye n'ime ihe kpatara usoro ndụ na ịzụ ahịa ahịa ndụ ji adịwanye mkpa n'oge a. Ọ na-abanyekwa na usoro ndụ ndụ dị iche iche metụtara azụmaahịa dijitalụ. N'amaghi ebe olile anya gi di na ndu ndi ahia, igagh enwe ike inweta ohere ha iji gbanwee otu ị ga esi esi soro ha.
You na-eji sọftụwia ahịa na-ere ahịa iji soro ndị ahịa gị? Gịnị kpatara ya ma ọ bụ gịnị kpatara ya?
Tags: ndu nurturingndu akaraNdụ ahịa ndụakụrụngwa ahịaahia nduNa-atụ anyaNkwado ire ahịa